“युवा नेपाल संगठन र परिबर्तनसिल नेपालको परिकल्पना” – मझेरी डट कम
“युवा नेपाल संगठन र परिबर्तनसिल नेपालको परिकल्पना”
नेपाल त्यही देश हो जहाँ मानबले मानव्लाई किनबेच गर्छ -बस्तु सरी, फटाह र गुन्डाहरु किनिन्छ यहाँ, लाइसेन्स, पासपोर्टको त कुरै छोडौं, कानुन पनि किनियको छ ! त्यत्तिले पनि नपुगेर भबिष्य निर्माणको ज्योती “शिक्षा” किनिएको छ यहाँ ! हुने खानेको लागि रजाइ गर्ने थलो बनेको छ हाम्रो देश नेपाल ! फटाह, डकैती अनि हत्याको आरोप लागेकालाई संरक्षण दिन पछी हट्दैन सरकार ! आखिर राज्य, किन जनता माथि खेलवाड गरी रहेको छ ? सागर सरी राजनीतिक परिवर्तनको लागि उर्लिएका युवाहरुको भावनालाई किन बुज्ने कोसिस गर्दैन सरकार ? किन हजारौ हजार युवाहरुलाई देश भित्रै रोजगारको ब्यबस्था गर्न सक्दैन ? किन महिला, दलित्, जनजाति लगायतका बर्ग माथि सोसन हुँदा समेत रमिते बनेर हेरी रहन्छ सरकार ? गास्, बास र कपासको निती लिएर अगाडि बढिरहेका राजनीतिक दल र सरकार प्रमुखहरु किन अगाडि बढ्न सकी रहेका छैनन् ? त्यसैले त भन्न मन लाग्छ यो पहुच, पावर र राजनीतिमा फेल भएका नेताहरुको देश हो !
– राजेन्द्र गौतम